Fursadaha Tabaruca ee Dadka Naafada ah | Tonka Adeegaa
Tuulada Qiimaha ee ARC
ARC waxay taageertaa dadka naafada ah xagga caqliga iyo koritaanka. Tabaruceyaasha dukaamada wax iibsata ayaa alaabta kala bixiya, kala sooca oo calaamadeeya tabarucaadka isu diyaarinaya iibka. Hanuuninta iyo tababarka la bixiyay. Fursadaha shaqsiyeed iyo kooxeed.
Machadka Baxnaaninta ee Geesinimada
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad tabarucdo! Waxaan si firfircoon u raadineynaa oo aan ku qiimeynaa mutadawiciin aragtiyo kala duwan iyo khibradaha nolosha. Waan kula shaqeyn doonnaa si aan u helno booska iskaa wax u qabso ee saxda ah.
Erik's Ranch iyo Dib u gurasho
Tabaruceyaashu waxay u baahdeen inay ka caawiyaan barnaamijka fuushan fardaha lagu daaweeyo shakhsiyaadka qaba baahiyaha gaarka ah ee Goobaha Game Farm ee Minnetrista. Sidoo kale raadinaya "voluntourists" barnaamijka Erik ee Minnesota Adventure si ay ula shaqeeyaan dadka waaweyn ee autistic-ka ah.
Degmooyinka Hammer, Inc.
Hammer wuxuu u adeegaa shakhsiyaadka leh naafonimada korriinka ee guryaha kooxaha iyo guryaha, waxay bixiyaan adeegyo kala duwan waxayna leeyihiin fursado badan shaqsiyaadka iyo tabaruceyaasha kooxda.
Urur u heellan inuu kordhiyo madax-bannaanida dadka naafada ah ee jirka iyadoo loo marayo adeegsiga eeyaha adeegga. Ardayda mutadawiciinta ah waxay u baahdeen inay ka caawiyaan dhacdooyinka lacag ururinta.
Ciyaaraha fudud ee 'West Metro Miracle Athletics' waxay carruurta siisaa garasho iyo / ama caqabado jireed fursad ay ugu ciyaaraan kubbadda koleyga barnaamijka iCAN hoop iyo baseball iyagoo xubin ka ah West Metro Miracle League. Hoos ka eeg Miracle League ama iCAN hoop si aad u hesho fursado tabaruc.
Mount Acive Rolling Acres (Wareegtada Acres)
Ka taageer carruurta iyo dadka waaweyn ee leh korriin iyo naafonimo kale hoy iyo barnaamijyo kale. Fursado badan oo iskaa wax u qabso ah oo loogu talagalay shaqsiyaadka iyo kooxaha.
Joogtee 20 hoy oo loogu talagalay dadka waaweyn ee naafada ah ee ku dhex nool bulshada. Bixinta barnaamijyo taageero si ay awood ugu siiso shaqsiyaadka inay si madax-bannaan ugu noolaadaan Fursado badan oo iskaa wax u qabso ah oo shaqsi iyo kooxba ah.
Barnaamijka Tacliinta Bulshada wuxuu ka socday Minnetonka, Hopkins, St. Louis Park iyo degmooyinka dugsiga Wayzata. Fursadaha iskaa wax u qabso dhalinyarada iyo qoyska sanadka oo dhan ee la heli karo si loogu caawiyo dadka waaweyn ee naafada ah markay ka qayb galayaan fasalada / nashaadaadka Waxbarshada Bulshada.
Ciyaaraha Olombikada Gaarka ah ee Minnesota
Minnesota waxay u qaybsan tahay 12 meelood, mid walbana wuxuu qabtaa tartamo badan sanadkiiba wuxuuna u baahan yahay mutadawiciin badan oo caawiya. Dhallinyarada 14+ waxay ku tabaruci karaan dhacdooyinka, Dhallinyarada 16+ waxay iskaashi la yeelan karaan orodyahannada xilli iyaga oo la tartami kara, sidoo kale waxay ku tababaran karaan tababarka khadka tooska ah.
Saaxiibbada runta ah
Saaxiibbada runta ahi waxay bixiyaan khibrado nolosha beddela oo xoojiya madax-bannaanida iyo isku-kalsoonaanta carruurta iyo dadka waaweyn ee naafada ah. Saaxiibbada runta ahi waxay siiyaan kaamam iyo khibrado nasasho carruurta iyo dadka waaweyn ee leh naafonimo kala duwan, oo ay weheliyaan qoysaskooda iyo asxaabtooda
Waan Fuli Karnaa
Waxaan Rideyn karnaa, oo la aasaasay 1982, waxay siisaa faraska daaweynta iyo gaari qaadista dadka waaweyn iyo carruurta naafada ah. Tabaruceyaashu waxay u baahdeen inay horseed u noqdaan fardaha oo ay ku ag ag socdaan fuulitaanka. Khibrad fardo aan loo baahnayn, tababar ayaa la siiyay.
Ciyaaraha Fudud ee West Metro
Ciyaaraha fudud ee 'West Metro Miracle Athletics' waxay carruurta siisaa garasho iyo / ama caqabado jireed fursad ay ugu ciyaaraan baseball xubin kooxeed leh Miracle League iyo kubbadda koleyga oo ay la socdaan barnaamijka iCAN hoop. Hoos ka eeg Miracle League ama iCAN hoop si aad u hesho fursado tabaruc
Ku raadi aagga baahida:
Daryeelka Caafimaadka iyo Caafimaadka
Guri iyo Hoylaawe
Dhacdooyinka Gaarka ah iyo Fikradaha Mashruuca
Degmo ahaan /
Tonka U adeegtaa /